Harley Davidson Isboortiga Dabada Ilayska Bedelka XL 1200C 883 Isboortiga Dabada Nalka
Bogga ugu weyn > Harley Tail Light
DOT u hoggaansanta iftiinka dabada leh ee beddelka Harley Davidson Mootada Isboortiga, muraayad cad/sigaar cabbin ayaa diyaar ah.
Feature of Sportster Dabada Light Assembly
U hoggaansan DOT -- Nalalka u hoggaansan DOT waxay dammaanad qaadayaan in nalalkaagu u hoggaansan yihiin Waaxda Gaadiidka Mareykanka si loogu isticmaalo Mareykanka iyo Kanada si loo sugo amniga dadka kale.
Iftiin Wanaagsan -- Iftiinkan dabada biriiga ah waxa uu qaataa qaabaynta qaabka jiifka, kaliya maaha in uu cusboonaysiiyo muuqaalka mootadaada, dusha iftiinka cas waxa uu sidoo kale kuu fududaynayaa in aad soo jiidato dareenka oo aad hubiso badbaadadaada marka aad baabuur wadid.
Tayada Sare -- Lens-ka qiiqa LED-ka Dabada, Guryaha culus waxay ka samaysan yihiin balaastiig heer sare ah oo ABS ah si loo hubiyo cimilada aan caadiga ahayn, iska caabbinta saamaynta iyo biyuhu: IP67.
Naqshad sarreysa -- Ku qalabaysan ilaalinta wareegga gudaha, kaas oo dammaanad qaadaya wax liidasho ama guuldarro ah oo hubinaysa waxqabadka dhammaan-cimilada calaamadaha leexashada.
Way fududahay in la rakibo -- Ku xidh oo ciyaar Ma jiro suunka siliga dheeraadka ah ee loo baahan yahay, kaliya si toos ah ugu xidh adabtarada saamiyada. Kaliya waxay kugu qaadanaysaa 15-20 daqiiqo inaad ku dhammayso rakibaadda, wayna fududdahay inaad ka furto midkii hore iyo xidhidhiyaha cusub.
Tilmaamaha Beddelka Iftiinka Dabada Sportster
model Sportster, Dyna, Wadada Glide
Dhererka 92.4mm / 3.64 inji
width 136mm / 5.35 inji
qoto 118.3mm / 4.66 inji
Power 8W (Booska/Iftiinka biriiga); 0.6W (Iftiinka saxanka shatiga)
Midabka Muraayadaha Dibedda Nadiif/sigaar cabbin
Heerkulka Shaqaynta Ugu Yar -40°C/ -40°F
Heerkulka shaqada ee ugu badan 85°C/185°F
Sawiro dheeraad ah Harley Davidson Sportster Tail Light